I-WP Konke Ngenisa: Indlela Yokungenisa Ngenqwaba Isigaba Se-Taxonomy Ku-WordPress kusuka ku-CSV | Martech Zone
NgoMsombuluko, Novemba 15, 2021 NgoMsombuluko, Novemba 15, 2021 Douglas Karr
Inkampani yami isebenza kakhulu WordPress ukuhlanganiswa kanye nokusetshenziswa, okudingeka kuthuthe amathani edatha kusukela kuzikhathi zakudala noma olunye uhlelo lokuphatha okuqukethwe (CMS) ngokuphelele. Ngokuvamile, lokhu kubandakanya ukungenisa imikhiqizo ye WooCommerce, ingeza izindawo ohlotsheni lweposi lwangokwezifiso, noma ukwakha i-taxonomy ngokufaka okwaziwayo. Uma ubufuna, ngokwesibonelo, ukwengeza izigaba ngezwe, isifunda, noma isifundazwe... ungase usebenze ku-WordPress amahora amaningi ufaka idatha. Ngokujabulisayo, kune-plugin ye-WordPress emangalisayo eyenza le nqubo ngokuzenzakalelayo ngokukuvumela ukuthi ungenise Inani Elihlukaniswe Ngokhefana (CSV) ifayela lanoma iyiphi into ngaphakathi kwe-WordPress.
On Martech Zone, kade sandisa eyethu Izimpawu ikhasi lifike endaweni lapho lingalawuleki khona. Uhlu olukhulu lwama-akhronimi obuchwepheshe bokuthengisa nokuthengisa, izifinyezo zabo, nencazelo yabo. Ikhasi lilayisha kancane ngoba likhulu kakhulu futhi alimakwanga kahle ku-HTML ukuze kuseshweni lwemvelo. Ngakho-ke, ngenza intuthuko esizeni ukwakha uhlobo lokuthunyelwe okungokwezifiso kanye ne-taxonomy ewumphumela ukuze ngithuthukise isivinini, ikhono lokuhlunga uhlu, kanye namazinga aphelele.
Ukuqala, ngifuna izigaba ze-alphanumeric ukuthi zinikeze isifinyezo ngasinye, ukusuka ku-0 kuye ku-9 kanye no-A kuye ku-Z. Ukwengeza lokho kuzothatha isikhathi esithile, ngakho ngakha ifayela le-CSV elinegama lesigaba, i-slug, nencazelo:
Indlela Yokungenisa Isigaba Sami se-CSV
Ngokungeza i- I-WP Yonke Ukungenisa i-plugin, ngikwazi ukuhamba kalula kuwizadi yabo ukuze ngilayishe i-CSV, ngifake imephu izinkambu zami, ngimise isihlonzi esiyingqayizivele, ngifake isifanekiso noma yiziphi izinkambu ezengeziwe, futhi ngingenise izigaba.
Manje, sengingakwazi ukubuyela ku-taxonomy yangokwezifiso engayakha ku-WordPress (ngayibiza ngokuthi i-Alfabhethi) futhi uyabona ukuthi zonke izigaba ziqanjwe kahle, ama-slugs asetshenziswa, futhi izincazelo zigcwele ngokugcwele. Futhi, esikhundleni sokuchitha ihora kunqubo, kuthathe imizuzu embalwa kuphela!
Qaphela: Isixazululo sami se-acronmy sisathuthukiswa ngakho-ke ngeke usibone uma uchofoza namuhla. Nokho, qaphela esikhathini esizayo esiseduze!
I-WP Konke Ngenisa: Izici
Ngihlabeke umxhwele nge-WP All Import ukuthi ngiyengeze kweyethu Ama-plugins we-WordPress ahamba phambili uhlu. Ngiphinde ngathenga ilayisense egcwele yenkampani yami, enika amandla amakhono amaningi, okuhlanganisa:
Sebenzisa noma yiliphi ifayela le-XML, i-CSV, noma i-Excel
Ngenisa noma Thekelisa Idatha kusuka kunoma iyiphi into ku-WordPress noma ku-WooCommerce, okuhlanganisa nabasebenzisi
Isekela amafayela amakhulu kakhulu, nanoma yisiphi isakhiwo sefayela
Ihambisana ne-plugin yangokwezifiso nezinkambu zetimu
Izithombe, izigaba, i-WooCommerce, Izinkambu Zangokwezifiso Ezithuthukisiwe, I-UI Yohlobo Lweposi Ngokwezifiso, njll.
Isikhombikubona esilula kanye ne-API eguquguqukayo
Izinketho zokuhlela ezinamandla
Zama i-WP All Import's Sandbox Environment I-WP All Import Plugin
Ukudalula: Angiyona ingxenye ye-WP All Import, kodwa ngisebenzisa izixhumanisi zami ze-WordPress kanye ne-WooCommerce kule ndatshana.
Tags: ama-akhronimiizinkambiso eziphambili zenkambisoCSVcsv ukungenisaukuthekelisaukuthekelisa abasebenzisithekelisa i-wordpressukungenisa isigabangenisa i-csvngenisa abasebenzisingenisa izigaba ze-wordpressWooCommerceWordPresswp konke ukungenisaxml